Ikhamera ye-iPhone 7 ye-Aramid Fiber nge Magnet China Manufacturer
Incazelo:Icala le-iPhone 7 ye-Aramid Fiber Phone,Ikesi yefoni ye-iPhone 7,I-Case 7 ye-Aramid Fiber Case
Home > Imikhiqizo > Icala le-iPhone > MagCase For iPhone 7 Noma 8 > Ikhamera ye-iPhone 7 ye-Aramid Fiber nge Magnet
I-iPhone 7 ye-iPhone engu-4.7 ye-Aramid Fiber Hambayo Case nge Magnet
Izinzuzo ze-Aramid Fiber:
I-Strong, Flexible, ehlala njalo.
Ukuphazamiseka kwesignali ye-ZERO.
Kukhanya kakhulu futhi kuncane.
Kudlule ukuhlolwa kwe-dropm 1.2m height.
Leli yi-Ultra Thin iPhone 7 Case eyenziwe nge-100% yama-Aramid Fiber okuyizinto ezikhethekile, i-Slim Fit ne-Sensuous nge-"Armor Body Grade". Kwakuyizinto ezifanayo ezisetshenziselwa izikhali zomzimba, izindiza zemishini, izinjini ze-jet, nezimoto ze-Formula 1 Race, ezivikela ngokuphelele i-iPhone yakho ukuhlala kude namaconsi empilweni yakho yansuku zonke. Ifanele ifoni yakho ngokuphelele. I-iPhone 7 Ikhamera Yefoni Ye-Aramid Fiber ikwazi ukufinyelela kalula futhi ngokwemvelo zonke izinkinobho namachweba. Ukuvulwa ngalunye akugcini nje ngokuhambelana ngokunembile, kodwa futhi kumvelo "wezinga eliphezulu".
Ukuzizwa kwesisindo. Isisindo esingaphansi kuka-14g. Esinye sezimo ezibucayi kakhulu emhlabeni.
Ukuqina okungahleliwe futhi okunamandla kakhulu. Izikhathi ezinamandla ezinhlanu kunensimbi ngesisindo esifanayo.
Izigaba zomkhiqizo : Icala le-iPhone > MagCase For iPhone 7 Noma 8
Icala le-iPhone 7 ye-Aramid Fiber Phone Ikesi yefoni ye-iPhone 7 I-Case 7 ye-Aramid Fiber Case Icala le-iPhone 7 le-Aramid Fiber Phone I-iPhone8 I-Aramid Fiber Case I-IPhoneX I-Aramid Fiber Case I-3D Grip Case iPhone E-Aramid Fiber Case I-iPhone6 ​​I-Aramid Fiber Magnet Case